Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ulwaphulo-mthetho » URajasthan Wenza ukungaziphathi kakuhle kubakhenkethi ulwaphulo-mthetho
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
URajasthan kunye nolwaphulo-mthetho lwabakhenkethi
Umthetho omtsha unokuhamba indlela ende ekukhuseleni abakhenkethi ekuhlukumezeni nakumava amabi ngelixa baseholideyini eRajasthan.
Ukuziphatha gwenxa kubakhenkethi ngoku kuya kubonwa njengetyala, ulwaphulo-mthetho.
Ukuba umntu uyayiphinda le ndlela yokuziphatha, umoni uya kuthi avalelwe ngaphandle kokufumana ibheyile.
Umbuso wasemantla, ofumana iindwendwe ezivela kweli kunye nakwamanye amazwe, uze nomthetho onokuthi uhambe indlela ende ekukhuseleni abakhenkethi ekuhlukumezeni nakumava amabi ngelixa baseholideyini.
Nakuphi na ukungaziphathi kakuhle kubakhenkethi kuya kuthi ngoku kubonwe njengesenzo esaziwayo, kwaye ukuba olu hlobo lokuziphatha luyaphindwa, umoni uya kugcinwa elugcinweni ngaphandle kwebheyile.
Ukufezekisa oku, kwenziwe izilungiso kwaye icandelo 27A laziswa kwi Urhwebo lwezoKhenketho eRajasthan, Umthetho wokuququzelela kunye noMmiselo ka-2010. Oku kwapasiswa ngevoti yelizwi kwiNdlu yoRhulumente. Iinkokheli zeshishini zithi bazakube bebukele ngomdla ukuba le milinganiselo iphunyezwa njani emhlabeni.
Icandelo le-13 lomthetho i-Regulation Act 2010 Act lijongana “nokuthintelwa kwemisebenzi ethile kunye nemisebenzi kwiindawo zabakhenkethi, iindawo, neendawo ekufikelwa kuzo,” oko kuthintela ukuthoba, ukucenga kunye nokuthengisa amanqaku athengiswayo ngaphakathi okanye kufutshane nayo nayiphi na indawo yabakhenkethi.
Ngelixa urhulumente efumana abakhenkethi abaninzi abasuka kude nakufutshane ukuba babone iindawo ezininzi ezinomtsalane zendalo kunye nezikhumbuzo, kuhlala kukho izikhalazo zokuba abantu ababaphethe kakubi bayabakhohlisa, beshiya umbono ombi kunye namava. Ngokukodwa, kuye kwakho ukwanda kweziganeko zolwaphulo-mthetho lwabasetyhini olubangela ukuba abakhenkethi bamanye amazwe bathathe iholide baye kwenye indawo.
URajasthan ubenguvulindlela kwezokhenketho enomtsalane kwinkcubeko nakwezendalo kunye nokwenza ubugcisa kunye nobugcisa. Kwiminyaka yakutshanje, nangona kunjalo, iMadhya Pradesh, iKerala, kunye neGoa zize nezimvo ezintsha kunye izicwangciso zokutsala abakhenkethi.
Iinqaba kunye namabhotwe ombuso wamakhosi aneepropathi zelifa lemveli ngokunjalo, azilingani, kodwa loo nto ayizukubaluleka ukuba urhulumente naye ufumene igama elibi kuba ezinye iigusha ezimnyama zingcolisa umfanekiso wombuso.
Ukuza kude kangakanani inyathelo elitsha lokuthintela ubugwenxa okwangoku akukabonakali.